Articles | Wadamagoo News
Alle ayaa mahad oo dhan iska leh, amaan alle iyo nabadgelyona korkiisa ha ahaato rasuulkeenii muxamed iyo ehelkiisii iyo asxaabtiisaba. Waxay ahayd Habeen Axadi soo gelayso taariikhduna ay ahayd 14/08/2016 goobtuna waa Crown Hote...
Marka laga hadlaayo shaqadaiyo shaqo la,aanta, waxaa muhiim ah in marka hore la qeexo waa maxay shaqadu iyo shaqo la,aantu. Wadamada hore u maray laba ayey u kala saaraan shaqada. 1) shaqo cashuuri ku waajibtay oo shaq...
Wuxuu ahaa wiil qoyskoodu aad faqiir u yihiin, waxay ka dagganaayeen magalaada xaafadda ay ku nool yihiin dadka aad ka faqiirka u ah. Si uu xaafaddooda u caawiyo, waxa uu iibin jirey cuntooyinka fudfud, sida keeka , i.w.m isagoo d...
AMIN BAYNU JOOGNAA AFKA HOOYO NACAS YAHAY!!! Waxaa tiriyey Maxamed Shugri .
Waxaynu joognaa xili qofku beyr ka yeeshay inuu afka Hooyo si badhax tiran ugu hadlo Waxaynu xili qofku hadaanu odhaahdiisa ku xardhin ereyo qalaad uu dareemayo nuqsaan Waxaynu joognaa xili hormuudka bulshadu ku faanaan in aan...
Tuulada Qudbigu waxay xarun u tahay dariiqada loo yaqaan Timaweyn ama Rabiiciya oo looga jeedo magaca ninka asaasay oo la yidhaahdo Maxamed Rabiic. Waxay xarumo badan ku leeyihiin meelo badan oo wadanka ka mid ah, waxaana lagu...
Hadalkii Cumar Carte Qaalib Ciidankii Maxamed Siyaad Barre(MSBarre) oo markii horeba ay naafeeyeen jabhadii SNM oo aan niyad ku dagaalamayn, Markii la soo gaadhay bishii Janaweri ee sannadkii 1991-kii ayuu Rasal-waraarihii xuku...
Boqor iyo afartiisii xaas – W/Q. Mukhtaar Cabdi Biite
Waa hore waxaa jiray; nin boqor ah oo qabay afar dumar ah. Xaaska afraad wuu jeclaa waanu ilaalinjiray, goor kastana wuu raali gelin jiray waxay u baahatana wuu u keeni jiray. Xaaska saddexaadna wuu jeclaa balse waxay ka raaci j...
Halku dhigooda Dadka Berbera Xasarad iyo Xalad Murugsan inay Ka dhigaan u Tafo-xeytay Waa Yaa Wax-uun Cuna Aan Wax Baba Qaban ! Waxaan Arinta BeBera Iyo Shiekh Laga Wad-wado u arka inay Tahay Xantii la sheegi jiray Oo C...
Bulshada soomaalilaand waxay kaga nasiib badan yihiin waddamo badan oo ku yaala dunida ama qaarada madaw hanaanka xisbiyadda badan iyo doorashada ay u helaan in ay usha u dhiibtaan ciddii ay ka maaransan waayaan in ay hogaamiso. ...
xukuumadda maxaakala gudboon heshiiska DP WORLD ee Berbera, maxaase khatar ku ah heshiiska : By Xuseen Xasan Xuseen(Xusen-Mahdi).
DP World waxa ay heshiis la gashay Somaliland horraantii may 2016, waxa uu noqday heshiis ay warbaahinta caalamku aad uga hadashay, oo la odhan karo indhihii caalamka ayey ku soo jeedisay dalka. Heshiis miisaankiisa leh weeye, war...